Nivoaka Ho Any Burkina Faso! An-Dalana Ho any Ouagadougou Ny Ekipan’i OpenStreetMaps Nizera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2014 4:53 GMT
Tamin'ny volana Mey teo, niainga tao Niamey hoany Ouagadougou ny ekipa OpenStreetMap Mandrakitra an-tsarintany an'i Nizera- tetikasa nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices 2013 – mba hanatrika fivoriana ao Burkina Faso. Ny tanjon'ny atrikasa atrehin'izy ireo dia ny hanatsara ny fahaizan'izy ireo ara-teknika mikasika ny rafitra OpenStreetMap. Ankoatra ny ekipa OSM Burkina Faso, nihaona tamin'ireo ekipan'ny OSM avy ao Senegaly sy Togo ihany koa izy ireo. Hoy izy ireo [FR]:
… nampahafantatra ny zavatra ataony ao anatin'ny tetikasany ireo rafitra rehetra avy amin'ny firenena mpandray anjara, ka ny tetikasa Mapping For Niger “Mandrakitra An-tsarintany an'i Nizera” no tena nahazo fankasitrahana be tamin'ny vokatra azony hatramin'izao. Na dia eo aza ny tsy fahampian'ny fitaovana teknolojika amin'ny tetikasa, nahafahan'ireo mpikambana nanao asa matotra tamin'ny fametrahana ireo tahiry an-tsaritany manerana an'i Nizera ny fikatrohana sy ny fahavitrihan'izy ireo.
Sombin-tsary nandritra ny dian'izy ireo. Some photographs from their trip:
Ekipan'ny “Mapping for Niger” ary mpikambana sasany avy ao amin'ny OSM ao Ouagadougou
Tamin'ny fiafaran'ny atrikasa, naka sary niaraka tamin'ny solosaina avy amin'ny OpenStreetMap ny ekipa Nizeriana.
Naka ny sarin'ireo namany sasany avy ao amin'ny OSM hafa nandritra ny fihaonana ihany koa ny ekipa:
“Manao ahoana! Alice Souka OSM Togo, Faly be aho nihaona tamin'ireo namana avy ao amin'ny OSM Nizera”
“Gauthier OSM Burkina Faso, miaraka isika”
Ary ny mpampianatr'izy ireo:
Navoaka indray avy ao amin'ny pejy Facebook Mapping for Niger ny sary rehetra.